nepali « whyouth
उज्यालो र आकर्षण
रातमा उज्यालोतिर किराहरुको आकर्षण देखेर,
उसले सराप्दै भन्यो-
‘कस्ता साला किराहरु!’
उसलाई किराहरुसँग किन रीस थियो कुन्नि?
ती शायेद चेतना शुन्य किराहरुसँग ,
एकोहोरो, एकनास हावामा वृत बनाउदै
उज्यालोलाई परिक्रमा गर्ने किराहरुसँग,
उसको भागको उज्यालो अलिकति छेकेकोले होला कि ?
ऊ पनि त उज्यालोको लोभी नै रहेछ।
एउटा भन्दा अर्को नजिक,
ठोक्कीदैं बल्ब को दिवारमा कहिले,
आगोको उज्यालो भए त-
त्यसैमा जल्दै कोहि कोहि,
एउटाको ठाउँ अर्कोले
खोसी हाल्ने तुरुन्तै- किराहरु सँग ?
आफु जस्तै लागेर हो कि ?
ऊ पनि त इर्ष्याले जल्छ कहिले कहिले,
रीसले झोकिन्छ, अहंकारले बज्रिन्छ
जमिनमा ठोकिन्छ कहिले कहिले।
बत्ति निभे पछि राति,
किराहरु खै कता जानछन् ?
पट्ट्यार लाग्दो क्यार क्यार त सुनिन्छ रातभर-
उसलाई त्यसमा पनि रिस उठ्छ,
अनि मुर्मुरैदै निदाउँछ,
बिहान आँखा मिच्दै उठ्दा,
हफिजुल कुचो लिएर आइपुग्छ,
बंगाली- जो ऊ त्यति बुझ्दैन- मा
खै के गुन गुनौउदै हफिजुलले बढार्छ,
कासिंगर- जसको ठुलो अंश,
किराहरु भुइँमा मरेका,
या हिजो रातिको स्खलनले शिथिल
हफिजुल्ले बढार्छ – वास्ता नगरी।
बिहान हुने बित्तिकै,
मान्छेहरु उठ्छन् – सबेरै,
अनि खै कसको हो वरिपरी,
एकोहोरो, एकनास घुमीरहन्छन
क्यार क्यार गरिरहन्छन
पट्ट्यार लाग्दो, घिन लाग्दो- दिनभरी।
अंध्यारोमा बरु जुनकिरी उज्यालो बोकेर,
आफू कत्ति नजलिकन,
Leaveacomment Posted in Literature Tagged आकर्षण, nepali, people, poem